Arakan Rohingya Council (ARC)
ARC ENGLISH PROGRAM
Let them voice out for their predicaments &
empowered to stand on their own!
FREE WELL-DEVELOPED & INTERNATIONAL-STANDARD ENGLISH COURSE FOR REFUGEE
NEW INTAKE OPENED!
Managed by: ARAKAN ROHINGYA COUNCIL
Taught by: Master Students of IIUM
Be part of us and get involved in volunteering to change the future of less fortunate. We are looking for volunteers who have passion to teach English to refugee student in Klang valley, Malaysia.
Click to Countinue >>
Posted by Arakan Rohingya Council at 2:26 AM No comments:
INVITATION FOR INAUGURATION CEREMONY OF RCEC
ROHINGYA COMMUNITY EDUCARE CENTER
No. 13, 5th Floor,3elements
Jalan Prima Tropika, Taman Prima Tropika, 43300 Seri Kembangan, Selangor
M: +6017-6336300 | E: fayas_ahmad@yahoo.com
အရ်စီအီးစီ အဆင့်မြင့် အစ္စလာမိစ် မူလတန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား ပညာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်း
Posted by Arakan Rohingya Council at 8:08 PM No comments:
May this letter reach you while you are in the best of Iman and health by the Grace of Allāh Subhānahū Wa Taālā. Be part of us and get involved in volunteering to change the future of less fortunate. We are looking for volunteers who have passion to teach and train the refugee student in Kelang valley, Malaysia for following subjects.
Posted by Arakan Rohingya Council at 6:09 AM No comments:
Data Collection of Rohingya Schools
ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ကြား ပေးနေသော ကျောင်းများစာရင်း
အစ္စလာမို အာလိုင်ကုမ် ၀ရဟ်မတုလ္လာဟ်ဟေ့ ၀ဗရကာတူ
ရက်စွဲ။ ။၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၁၈ ရက်။
ဟာလူအာန်နှင့် အာရကာန် ရိုဟင်ဂျာကောင်စီ မလေးရှား (အေအရ်စီ)တို့ ပူးပေါင်းပြီး ရိုဟင်ဂျာကလေးသူငယ်များ၏ ပညာ ရည်မြင့်မားလာရေးကို ရည်စူး၍ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကေအလ်မြို့အနီးတ၀ိုက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအားပညာ သင်ကြားပေးနေသော ကျောင်းပေါင်း (၂၀)ကို စာအုပ်၊ စာရေးကိရိယာနှင့် အခြားသင်ထောက်ကူပြု ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေး ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ ထိုသို့သောကျောင်းများ၏ စာရင်းကောက်ခံပြီး အရည်အချင်း ပြည့်မီသော ကျောင်းများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင် ဘာလတွင် အခမ်းအနားဖြင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ်သွားမည်။
Posted by Arakan Rohingya Council at 8:20 AM No comments:
Call for Teachers - 2017
ရိုဟင်ဂျာ ကလေးသူငယ်များအား ပညာသင်ကြားပေးရန် ဆရာ/ဆရာမ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
ရက်စွဲ။ ။၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၁၅ ရက်။
ဟာလူအာန်နှင့် အာရကာန် ရိုဟင်ဂျာကောင်စီ မလေးရှား (အေအရ်စီ)တို့ပူးပေါင်းပြီး ရိုဟင်ဂျာကလေးသူငယ်များ ပညာသင် ကြားနိုင်ရေးအတွက် အဆင့်မြင့် မူလတန်းကျောင်း တကျောင်းကို ဆီရီကာမန်ဂါန်း ဈေးနားတွင်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ထိုကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားပေးရန် ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကား နားလည်ပြောဆိုနိုင်သော ဆရာ/ဆရာမ (၂) ဦးအလိုရှိသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းများအနက် တခုခုဖြင့်ပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(၁) ကုရ်အာန်ကို ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျ သင်ပေးနိုင်သူ။
(၂) မြန်မာစာကို ပီပီသသ သင်ကြားပေးနိုင်သူ။
အခြေခံလစာအဖြစ် မလေးရန်ဂိဒ် ၁၂၀၀မှ ၁၅၀၀ အထိခံစားခွင့်ရှိပြီး အရည်အချင်းနှင့် အလုပ်ပေါ်မူတည်၍ လစာတိုးမြင့် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
Posted by Arakan Rohingya Council at 10:31 AM No comments:
School Admission Day - 2017
ဟာလူအာန်နှင့် အာရကာန် ရိုဟင်ဂျာကောင်စီ မလေးရှား (အေအရ်စီ)တို့ပူးပေါင်းပြီး ရိုဟင်ဂျာကလေးသူငယ်များ ပညာသင် ကြားနိုင်ရေးအတွက် အဆင့်မြင့်မူလတန်းကျောင်း တကျောင်းကို ဆီရီကာမန်ဂါန်း ဈေးနားတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၁ ရက်မှစ၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ထိုကျောင်းတွင် ကျောင်းအပ်လိုသောကလေး မိဘများအနေဖြင့် မိမိ၏ ကလေးငယ်များကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စတင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ နေ့လယ် ၂း၀၀ နာရီအတွင်း လာရောက်​ကျောင်း အပ်နှံကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by Arakan Rohingya Council at 10:11 AM No comments:
Mobil Healthcare Program for Rohingya - 2017
အစ္စလာမို အာလိုင်ကုမ် ၀ရဟ်မ တုလ္လာဟ်ဟေ့ ၀ဗရကာတူ
ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကြပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
ဟာလူအာန်နှင့်အေအရ်စီ မလေးရှားတို့မှ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာမူစလင်(မ)များနှင့် ရိုဟင်ဂျာများအတွက် အခမဲ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်တရပ်ကို မဒရဆာ အိစ္စလာမီယား အရဗီယား သာလိမ်မုလ် ကုရ်အာန်ကျောင်း တွင်ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ် အတိုင်းတက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Posted by Arakan Rohingya Council at 1:14 AM No comments:
ARC Profile of Fayas Ahmad
Name : Fayas Ahmad bin Haji Shabbir Ahmad
Executive Council, ARC
Education : Diploma in Business Administration
Strength : Cooperative, Innovative & Discipline
Fayas Ahmad bin Haji Shabbir Ahmad, born on 18/12/1985 isaRohingya from Kyauktaw Tsp., Arakan, Myanmar. He came to Malaysia in 2006. He hasadiploma from International Islamic College, Malaysia. He is pursuing Master of Science in Islamic Banking and Finance at Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia (IIUM). He is cooperating with Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia (HALUAN) Malaysia in operating Rohingya Community Educare Center (RCEC) in Seri Kembangan and he is working for Rohingya Student Association (RSA-IIUM) as General Secretary. He serves asapart-time instructor for ARC English Class. He is Chief Executive Officer of ARC and one of the co-founders of ARC.
Posted by Arakan Rohingya Council at 4:57 AM No comments:
ARC Profile of Shujauddin
Name : Shujauddin bin Haji Karimuddin
Strength : Friendly, Cooperative & Productive
Shujauddin bin Haji Karimuddin, born in 1980 isaRohingya from Kyauktaw Tsp., Arakan, Myanmar. He came to Malaysia in 1999 and he left for Australia in 2005. He isaRohingya activist and he is an Australian citizen now. He is married and he has two children. He was appointed as executive for many associations and sport clubs. He joined the Burma Campaign Australian and the Burmese Democratic Movement Association. He had worked with Multicultural Development Australia (MDA) for nine years. He serves asapart-time instructor for ARC English Class. He is one of the co-founders of ARC and he is working as Executive Director for ARC.
Posted by Arakan Rohingya Council at 4:52 AM No comments:
ARC profile of Shafi Alam
Name : Shafi Alam bin Muhammad Shafi
Strength : Friendly, Ambitious & Determinant
Contact : +6019-644 2566
Mr. Shafi Alam bin Muhammad Shafi, born on 26/08/1966 isaRohingya from Kyauktaw Tsp., Arakan, Myanmar. He is married and he has two children. He is working as Managing Director of Restoran Ila in Kajang Utama, Malaysia. He came to Malaysia in 1990. He was appointed as adviser for many welfare societies and sport clubs. Currently he is sitting on Advisory board of Surau Kampung Cheras. He is one of the co-founders of ARC and he isamember of Board of Directors of ARC.
Posted by Arakan Rohingya Council at 4:29 AM No comments:
မြန်မာမွတ်စလင်(မ)များ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းအပေါ် မွတ်စလင် (မ)ထု နုတ်ပိတ်နေခြင်းအား ဂရန်အာယာတိုလာ ဝေဖန်
Qom (Persian: قم) isaholy city between Tehran and Isfahan ။ ။အစ္စလာမစ်ပြည်သူ့ သမ္မတအီရန်နိုင်ငံဧ။် ထင် ရှားသော ရှီယာဘာ သာရေးခေါင်းဆောင် ဂ...
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာမွတ်စလင် - ဌေးလွင်ဦး
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင် မွေးဘွား နေထိုင်သော လူသား သည်မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှ ကချင် လူမျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံသား ကခ...
မြန်မာပြည်သား မူစလင်(မ) များအတွက်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
အစ္စလာမို အာလိုင်ကုမ် ၀ရဟ်မတုလ္လာဟ်ဟေ့ ၀ဗရကာတူ အာရကာန် ရိုဟင်ဂျာကောင်စီ မလေးရှား (အေအရ်စီ) မှ ရိုဟင်ဂျာများ ဘ၀လွယ်ကူစွာ ရပ်တည်နိုင်ရေ...
မီတ္ထီလာ ပဋိပက ကြီးထွားရန် သင်္ကန်းခြုံ ၀ီရသူ၊ ၉၆၉ အဖွဲ့ ၀င်များနှင့် RNDP ပါတီဝင်များ မဟုတ်မမှန် ၀ါဒဖြန့် လှုံဆော်
မီတ္ထီလာဖြစ်ရပ်အား ပိုမိုကြီးထွားစေရန် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ သင်္ကန်းခြုံ ၀ီရသူ နှင့် ၉၆၉ အဖွဲ့ ၀င်များ RNDP ပါတီဝင်များ ပူးပေါင်း၍ မဟုတ်မမ...
ရခိုင် ဘယ်သူလဲ ? ရိုဟင်ဂျာ ဘယ်သူလဲ
ရခိုင် ဘယ်သူလဲ ? ရိုဟင်ဂျာ ဘယ်သူလဲ ? by Kyauk Taw Family
Myanmar Version This Video is in Rohingya Language ဤဗွီဒီတွင် ရိုဟင်ဂျာဘာသာ စကားအသုံး ပြုထားသည်။ နောက်ဆုံးအသုတ် အလုပ်သမား...
မိတ္တီလာ မြို့တွင် ဗလီ ၈ လုံးနှင့် နေအိမ်များ ဖျက်ဆီး ခံရ
RB News 21.3.2013 မိတ္တီလာ ။ ။ မိတ္တီလာ မြို့တွင် ယမန်နေ့ နံနက် ပိုင်းတွင် စတင် ခဲ့သည့် ပဋိ ပက္ခသည် ည ၁၀ နာရီ ခန့်တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ြ...
AID FOR FLOOD VICTIMS IN MALAYSIA PROGRAM REPORT
AID FOR FLOOD VICTIMS IN MALAYSIA PROGRAM REPORT (BANTUAN KEPADA MANGSA BANJIR) Alhamdulillah, Aid for Flood Victims in Mal...
လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ် တားဆီးရေး အပြည့်အဝ မဆောင် ရွက်ခဲ့ကြောင်း ကင်တာနားပြော
RFA : 2013-04-02 မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာတွေရှိနေပေမဲ့၊ အစိုးရဟာ ကာက...
မလွဲမသွေပြန်လည်ရေးဆွဲရမည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ
ဦးမောင်ဖေတင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥဒေ အခန်း ( ၈ ) နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့် အရေးနှင့် တာဝန် မျ...
Prayer Time (Solat Time)
For Kuala Lumpur ONLY, Calculation is based on Hanafi teaching.
Standard Local Time Of Myanmar
No.6-3, 2nd Floor, Jalan 1/2D, Taman Seri Murni, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel: +603 - 6127 0825
Write n Leave Something Good B4 u Leave!
Copyright: Arakan Rohingya Council (Malaysia). Simple theme. Powered by Blogger.